Waxaan kuu sheegnay in: si aad wax cusub u abuurto waa inaad ka bilaabataa fikrad weyn? Tani waa khalad, wax yar oo DIY ah ayaa ku filnaan kara oo ugu dambeyntii horseedi kara mashruuc weyn. Waxaan kuu sheegnay in: si aad wax cusub u abuurto, waa inaad noqotaa mid hal abuur leh; in ay yihiin shaqsiyaad dhowr ah? Tani waa qalad, sirdoon wadareed ayaa jira, tani waa xitaa waxa lagu garto maskaxda aadanaha. Ma laguu sheegay in aad wax cusub abuurto waa in aad halis gasho? Ma aha innaba, waa in la raadiyo in la yareeyo khataraha in aan samayno hal-abuurnimo weyn. Si aad wax cusub u samayso, ma u baahan tahay diblooma? Taas beddelkeeda, hal-abuurayaashu aad bay u kala duwan yihiin, waxay ka yimaadeen dhammaan asalka. Haddaba sidee u abaabuli kartaa dadka kale si ay fikradaada u horumariyaan? Sidee looga bilaabaa fikrad oo loo horumariyaa? BY DIY! Fur xirmada hal-abuurka, dib u habeyn ku samee mashruucaaga adoo isticmaalaya agabyada yar ee aan ku siineyno, ka hel dhiirigelin jilayaasha markhaatiga ah ee aan kuu soo uruurinay. Dhab ahaantii, sababta sida DIY, waxaad leedahay fikrad iyo qalab ... Markaa bilow! Keligaa ha joogin, ka faa'iidayso sirta guud ee kugu xeeran. Ha qorsheyn, raadi, tijaabi, noqo, dib u bilow!
Laga soo bilaabo hal-abuurka ilaa hal-abuurka Diisambar 9, 2021Tranquillus
horeArdayda dyslexic ee hoolka muxaadaradayda: fahamka iyo caawinta
socdaXasaanadda Dhallaanka ah